Shiinaha Dukaan-qaadayaasha Boorsada Boorsooyinka - Jumlada & Iibso Qiimo-dhimis Boorsada - - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Boorsooyin>Boorsada dhabarka shiraaca
(1) Boorsadan hal-garabka ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, iftiiminta, nuugista shoogga, xirashada caabbinta, nolosha muddada dheer, shaqeynta badan, iwm. inaad si fudud u keydiso iPad-kaaga, taleefanka gacanta, boorsada jeebka, iyo joornaalka A4. Waxyaabaha kala duwan ee lagama maarmaanka u ah sida dalladaha iyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
(1) Qaybta iibka: midkiiba. (2) Cabirka baakadka caadiga ah: 48cm X 34cm X 12cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si lagugu badbaadiyo xamuulka. (3) Qeexitaanka xirmooyinka: 50cm X 36m X 60cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh. (4) Qaabka gaadiidka: badda, hawada, dhulka. Waxaan dooran doonaa habka ugu habboon ee gaadiidka saadka.
(1) Boorsadan hal-garabka ahi waxay leedahay astaamaha biyuhu, iftiiminta, nuugista shoogga, xirashada caabbinta, muddada dheer ee adeegga, shaqeynta badan, iwm. laptop-ka iyo agabka dhinacyada, sida kiiboodhka, jiirka, U diskiga, moobilka moobaylka, iwm inta lagu jiro shaqada, safarka, safarka ganacsiga iyo waqtiga firaaqada.